Daawo:ISIS Oo dishay 1.430 Qof Oo Siiriyaan ah kuna jiraan Caruur.
Tuesday November 18, 2014 - 18:50:01 in Maqaallo by Super Admin
Warbixin laga soo saaray dadka illaa iyo hada ay kooxda ISIS dileen tan iyo intii ay kooxdaasi ku dhawaaqday khilaafada ayaa la sheegay in dalka Siiriya oo kaliya kooxdan ku dishay dad gaaraya 1.430 qof.
Warbixintan ayey soo saareen hay’ada Diiwaangelinta xaquuqul-Insaanka ee Siiriya.
Dadkan ayey ku jiraan dad shacab ah oo aan ka qeyb qaadan dagaalada kuwaasi oo gaaraya 882 oo ay ku jiraan labo caruur ah.
Dadka la dilay ayaa sidoo kale waxaa ku jira dhalinyaro aan qaan-gaar ahayn oo mid kamid ah lagu eedeeyey inuu sawir ka qaaday xarun ay ISIS leedahay, halka wiil kale oo 15 sano jir ah lagu eedeeyey inuu Nabi Maxamed (SCW) uu aflagaadeeyey.
Sidoo kale kooxda ISIS ayaa dalka Siiriya qisaas ku fulisay askar gaareysa 483 oo ay nolol ku qabteen. Waxaa iyaguna jira 63 kamid ah maleeshiyaad la dagaalamay kooxda IS oo laftooda lagu fuliyey xukun dil ah.
Dadka kooxdan dishay ayaa waxaa ku jira 2 nin oo ka tirsanaa isla kooxdaasi oo lagu eedeeyey danbiyo kala duwan.
Dhamaan dadkan ayaa la sheegay inay yihiin kuwo ay kooxda ISIS ku qisaastay fagaarayaasha magaalooyinka ay ka taliyaan tan iyo dhamaadkii bishii June, warbixintan ayaan lagu soo darin dadka ku dhintay dagaalada fool ka foolka ah ee ka socda magaalooyinka wadanka Siiriya.